Ukusuka kuBuquguquko ukuya ku-Ingcaciso ePhakamileyo yoBukrelekrele boMoya | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 3, 2016 NgoLwesibini, Februwari 2, 2016 UPini Yakuel
Abantu abanezinga eliphezulu ngqondweni (EQ) bayathandwa, bonisa ukusebenza okunamandla kwaye baphumelele ngokubanzi. Bayagxininisa kwaye banezakhono ezilungileyo zentlalontle: babonisa ulwazi ngeemvakalelo zabanye kwaye babonakalise olu lwazi ngamazwi nangezenzo zabo. Banokufumana umhlaba oqhelekileyo kunye noluhlu olubanzi lwabantu kwaye bakhulise ubudlelwane obuhamba ngaphaya kobuhlobo kunye nokukwazi ukuvana.
Bayakufezekisa oku ngokuqaphela kunye nokuhlalutya izinto ezingacacanga: izijekulo, imvakalozwi, ukukhetha amagama, ukubonakala kobuso-iikhowudi ezichaziweyo nezichazayo ezihamba phakathi kwabantu-kwaye bahlengahlengise indlela abaziphatha ngayo ngokufanelekileyo. Ijaji isaphumile kwi-quintessential indlela yokulinganisa ye-EQ, kodwa asiyidingi kuvavanyo: siyaqonda abantu abane-EQ ephezulu njengabaphulaphuli abalungileyo, abo bakhulisa kuthi imvakalelo yokuba siyaqondwa, kwaye ngubani osabelayo kuthi ngaphandle komthungo.
Kuphando lwakhe lwe-EQ, Isazi ngengqondo uDaniel Kahneman wodumo lweNobel Prize ofunyenweyo ukuba abantu bakhethe ukwenza ishishini nomntu abamthandayo nabamthembayo endaweni yomntu abangamaziyo, nokuba loo mntu unikezela ngemveliso engcono ngexabiso eliphantsi.
Khawufane ucinge ukuba ngaba iimveliso zinokuyenza loo nto!
Abantu abaNgasemva kweDatha
Injongo yentengiso kukwazi kunye nokuqonda umthengi kakuhle kangangokuba imveliso okanye inkonzo iyamlingana kwaye iyazithengisa. Ulawulo olukhulu uPeter Drucker (emva ngo-1974!)
Umgaqo osisiseko wentengiso kukuba ukwazi umthengi ngcono kukunceda ukuba unikezele ngeemveliso kunye neenkonzo abazifunayo. Ukuqonda imeko yomthengi bekuhlala kuyinxalenye yento, kodwa kutshanje inani lolwazi lomxholo olufumanekayo kubathengisi lune-rocket.
Ukwenziwa komntu linyathelo lokuqala-siyazi ukuba ii-imeyile ezizenzekelayo ngoku zisebenzisa igama lethu rhoqo kunabazali bethu. Isakhono sokubiza abathengi ngegama kwaye ubonise isinxibo esifanelekileyo semozulu, umzekelo, sisiqalo esihle sokwenza unxibelelwano.
Kodwa ukuba ubukwazi ukujonga umfanekiso wabo bonke abathengi bakho kwiscreen seTV, ukwenziwa komntu kungadlulisela umfanekiso ombi, ongacacanga, ophantsi ube ziipikseli ezilithoba okanye ezilishumi elinambini. Uya kujolisa kwi-pixel eluhlaza ngokwahlukileyo kunaleyo imthubi, kodwa malunga nesixa sokwahlula onokusekelwa kukuzibandakanya kwabathengi bakho.
Ukuba usajonga abathengi bakho ngale paradigm ye-pixelated, uyaphoswa liliza elilandelayo kutshintsho lwabathengi, uxhobisa ii-brand ukuba zithambekele kubathengi bazo kwaye zibonise ubukrelekrele bemvakalelo kunye nobuntu ngendlela abanxibelelana ngayo.
Isitshixo sokufezekisa inkcazo ephezulu kukwidatha. Idatha yabathengi bakho itekhnoloji ilingana nezimbo zomzimba, ithoni, umxholo kunye neenkcazo ezibonwa ngabantu abakrelekrele ngokwasemphefumlweni. Ukuqina kwabathengi bakho, iimfuno, iimfuno kunye nokuthandabuza konke kubhalwe kwidatha. Kodwa ukuze wenze olo nxibelelwano lukrelekrele ngokweemvakalelo kunye nabathengi bakho, ufuna itekhnoloji eya kuthi iguqulele loo datha kwiipateni zokuziphatha.
Khulisa eyona mpahla yakho ibalulekileyo
Itekhnoloji yokuthengisa abathengi abanqamlezileyo inesakhono sokuhambisa umfanekiso wegranular kunye nomfanekiso ochaziweyo wabathengi bakho. Njengee-algorithms kunye nedatha kubahlalutyi ziye ziphucukile ngakumbi, ezo pixels kwisikrini seTV ziya ngokuya zincinci. Ngequbuliso uqaphela ukuba i-pixel eluhlaza okwesibhakabhaka ayiblowu kwaphela-ziiphikseli ezine: luhlaza, ngwevu, mdaka kunye neblue-blowu.
Ngoku unokujolisa kumaqela abathengi achaziweyo, elowo nomyalezo, umxholo okanye isithembiso esihambelana nokhetho lwabo, indawo kuhambo lwabathengi, indawo yokubamba kunye nemeko yengqondo. Kwaye njengoko itekhnoloji iqhubeka nokuqokelela kunye nokudibanisa idatha, umfanekiso wabathengi bakho ekugqibeleni uboniswa kubuqaqawuli obuchazwe ngokupheleleyo.
Olu lunxibelelwano olukrelekrele ngokwasemphefumlweni olunika amashishini anempumelelo umda kukhuphiswano ngokuphumelela iintliziyo zabathengi nokubanceda bakhulise eyona asethi inkulu abanayo- isiseko sabathengi babo.
tags: ngqondweniNgokwezifisoekujoliswe kuyo
UPini Yakuel, umseki kunye neCEO ye Optimove, ishishini elinenzuzo nelikhawulezisa ukukhawuleza, linamava angaphezulu kweminyaka elishumi kwintengiso yabathengi eqhutywa zii-analytics, ukubonisana ngeshishini kunye nokuthengisa. Umnqweno wakhe wokuqonda ukuba yintoni eqhuba isimilo sabathengi kwamkhokelela ekubeni akhokele phambili kuphuhliso lwe-Optimove, ishishini elikhokelayo kwiLifu lokuThengisa abaThengi, elixhobisa abathengisi ukuba bandise ixabiso labathengi babo. I-Optimove isetyenziswa ngamashishini ali-180 +, kubandakanya iZynga, iiKesare eziSebenzayo, iVithamini eneLucky, kunye neOffbrain.